Ubuhle nempilo Impilo yabesifazane
Ukungakhulelwa yilapho kuyisimiso sokuzivikela esincane kakhulu somzimba womuntu futhi ngezinye izikhathi sidinga ukulungiswa okusemandleni. Ngenxa yalokhu izinhloso ezikhethekile zihloswe - ama-immunomodulators kanye nama-immunostimulants. Zombili amaqembu ezidakamizwa zithinta izindlela ezifanayo, kodwa isisekelo senqubo sihlukile.
Ama-immunostimulants nama-immunomodulators - umehluko
Ukuzivikela komzimba kuqukethe izixhumanisi ezithile futhi kuyisethi yamaseli ahlukene ayenziwa ekuphenduleni imizamo yebhaktheriya, izifo noma amagciwane ukuhlasela umzimba. Inombolo enganele yamangqamuzana anjalo aholela ekufweni kakhudlwana, ikakhulukazi ngesikhathi sezifo eziwumshayabhuqe.
Ngokugeleza okungapheli kwezifo ezingelapheki, uhlelo lokuzivikela ngezinye izikhathi luyeka ukusebenza ngendlela evamile - izixhumanisi zenziwa ngokuvuvukala okuncane noma okungekho. Ezimweni ezinjalo, bakhuluma ngokuphazamiseka kwe-autoimmune, lapho amangqamuzana omzimba ehlasela wona.
Yile ndlela abazivikeli be-immunomodulators abafani ngayo nama-immunostimulants:
Ngokwehluleka kwezixhumanisi ze-cell protective, kubalulekile ukuvusa isilwane ukuba sikhiqize kwiminyango ekhulayo. Kulokhu, kusetshenziselwa ukuguqula umzimba.
Izifo ezizenzakalelayo zidinga ukulungisa ukulinganisa kwenani lamaseli, kokubili amakhulu nezincane. Kulesi simo abasebenzisa i-immunomodulators bayasiza, okubandakanya nezivikeli ze-immunosuppressors - izinto ezivimbela ukukhiqizwa kwezixhumanisi zokuvikela.
Ngokusobala, ama-immunomodulators kanye nama-immunostimulants banalo uhlu oluthile lokuhlukana, njengoba beyimithi yenhloso efanayo - ukulungiswa kokuzivikela.
Ukusetshenziswa kwemithi yalolu hlobo kuboniswa ezimweni ezinjalo:
izimo eziyinhloko zokuzivikela nge-immunodeficiency;
ukuphulukisa izifo ezingapheli ngezikhathi eziphindaphindiwe ezibangelwa ukutheleleka kwe-fungal, virus noma ibhaktheriya;
noma yikuphi ukugula okwenziwe yi-secondary state immunodeficiency state.
Ukuhlukaniswa kwama-immunostimulants anamuhla:
ukugqugquzela ukuphikiswa okungenasiphelo kwenyama (pentoxyl, prodigiosan, nucleate sodium, methyluracil);
izikhuthazo zokuzivikela komzimba (splenin, myelopid);
ama-stimulators ezinsiza-mzimba (i-leakadine, i-timoptin, i-molgamostin).
Uhlobo lwamakhambi alungisa uhlelo lokuzivikela komzimba lunconywa ngezinkinga ezilandelayo:
umsebenzi okwandisiwe wamaseli lymphocytic;
Amaqembu asemqoka ama-immunomodulators:
ama-probiotic microorganisms (bifidobacteria, amagciwane e-propionic acid, lactobacilli);
ezinye izinhlobo zama-antibiotics (i-rapamycin, i-cyclosporine);
Ama-immunostimulants yemvelo nama-immunomodulators
Kubalulekile ukuphawula ukuthi ngisho nezifo ezinzima ezingapheli nokutholakala okuqinile kwezifo, akudingeki njalo ukuthatha imithi yamaqembu acatshangelwe. Uhlelo lokuvikelwa komzimba lungabuyiselwa ngokugcwele ngokwamayeza amaningi angokwemvelo kanye nokuhlukunyezwa kwe-herbal.
Ukulungiswa kokuzivikela kungenziwa ngosizo lwemikhiqizo yemvelo elandelayo:
ubhontshisi (soy, uphizi kanye nobhontshisi obomvu);
Izitshalo ezinokuqukethwe okuphezulu kwe-selenium;
I-neuritis yezinzwa ze-ulnar
I-tonsillitis ye-Herpetic - izimpawu, ukwelashwa nemithi kanye namakhambi omuntu
I-Extrasystoles - indlela yokukhipha?
Ngemuva kokuthungula isikhumba esikhumbeni - yini okufanele uyenze?
Amalungiselelo antifungal ngezipikili
I-Echocardiography ngokuhlaziywa kwe-Doppler
I-thermoregulation eyenziwa kanjani emzimbeni?
Ukwelashwa kwemivimbo ye-varicose - izindlela zanamuhla nezisebenzayo eziphumelelayo
I-Cookware ye-oven microwave
Ukuvezwa okuphelele: abalingisi nama-backups abo kusethi
Indlela yokugqoka umshado ehlobo?
Indlela yokwenza lemonade yokuzenzela?
Ukupheka izindlebe ezinja
Inhlanganisela enemfashini yemibala ezembatho 2016
Imnandi kakhulu yemvubelo inhlama yama-pie othosiwe
I-cutlets ezivela ezintikeni zesikhumba
Izicathulo zabesifazane abasebenzisa imfashini - ebusika 2016
I-Shakira ne-Scarlett Johansson beza "Oscar" ngezithombe ezifanayo
I-Plasticine ngezandla zethu
Amamaki wokudla okugcobayo
Ukubeletha emanzini - ukunquma noma cha?
UChrissy Tayen okhulelwe uqhubeka eshaqisa umphakathi ngezithombe ezingenalutho
Indlela yokupheka i-lavender ama-pancake nge-kefir?
I-Mason Mask ithole indawo esikhundleni sika-Amber Hurd?
Yini okufanele ngigqoke ama jeans ehhovisi?
Isipho somkhulu ka-Birthday
Amabhande amabhande esikhumba - indlela ongakhetha ngayo nokuthi ungayigqoka kanjani ngendlela efanele?